साथीको ऋण तिर्न ट्वाइलेट सफा गरे, आफु जत्रै ठूला भाँडाभित्रै पसेर माझे : निश्चल बस्नेतको यस्तो छ संघर्षको कथा (भिडियो हेर्नुस्) - Prateek Nepal
मानिसका सपना समयसंगै परिवर्तन हुन्छन् । कति पुरा हुन्छन् तर कति सपना सपनामै सिमित हुन्छन् । लोभलाग्दो ख्याती कमाउन सफल उनी कलाकारको सबै क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल छन् ।
जो अति छिटो ब्याट, बल छाडेर संसारबाट सदाका लागी बिदा भए
ओलीले संसदमैं भने– संसद वि’घटन हुँदैन (भिडियो सहित)
चुनाब हा’रेको शो’कमाथि डोनाल्ड ट्रम्पलाई अर्को झ’ट्का : पत्नी मेलानियाले डिभोर्स दिदैँ, यस्तो छ कारण !
कार्यकाल सकिएपनि कुलमान नै पुन: ४ वर्षका लागी प्राधिकरणको सिईओ बन्ने पक्का !
ओच्छ्यानमा राखिएको मोबाइल प’ड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृ’त्यु